Inter Oo Diiday Dalabkii £85 Milyan Ay Chelsea Ka Gudbisay Romelu Lukaku – Garsoore Sports
Inter Oo Diiday…
Inter Milan ayaa diiday dalabkii Chelsea ee ahaa £ 85 milyan ee ay ku doonaysay weeraryahan Romelu Lukaku.
Lukaku, oo 28 jir ah, ayaa madax u ah baadi goobka Chelsea ee weeraryahan cusub kaddib markii Borussia Dortmund ay meesha ka saartay inay iibinayso weeraryahankeeda Erling Braut Haaland xagaagan kaasoo bartilmaameed weyn u ahaa Blues.
Halka milkiilayaasha Inter ay la legdamayaan arrimo dhaqaale oo waaweyn, haddana waxaa ka go’an inay sii haystaan ​​weeraryahanka xulka Biljimka ee Romelu Lukaku.
Lukaku, oo mar ahaa cayaaryahan Chelsea ah, ayaa muhiim u ahaa kooxda Talyaaniga xilli ciyaareedkii hore iyadoo Inter ay ku guuleysatay horyaalkeedii ugu horreeyay ee Serie A tan iyo 2010.
Waxaa la fahamsan yahay in Chelsea ay dooneysay inay heshiiska ku darto daafaca reer Spain Marcos Alonso.
Wali waa la arki doonaa haddii kooxda ku guuleysatay Champions League-ga ay soo bandhigi doonto dalab ka sarreeya midka laga soo diiday, in kasta oo Inter ay rumeysan tahay inay awood u leedahay inay iska caabiso kooxaha xiiseeynaya xiddigooda iyadoo Lukaku uu horay uga hadlay inuu doonayo inuu sii joogo kooxda.
Lukaku wuxuu u saftay 15 jeer saddex xilli ciyaareed kooxda Chelsea, intii u dhaxaysay 2011 iyo 2014, laakiin waxaa laga iibiyay Everton kaddib xilli ciyaareed cajiib ah oo amaah ah uu ku qaatay.
Wuxuu ku dhawaaday inuu dib ugu soo laabto kooxda sannadkii 2017 laakiin taa bedelkeeda wuxuu doorbiday inuu ku biiro kooxdii Jose Mourinho ee Manchester United isagoo ugu wareegay adduun dhan £ 75 milyan
Lukaku ayaa dhaliyay 42 gool 96 kulan oo uu u saftay United, laakiin wuxuu ugu biiray Inter sannadkii 2019 lacag rikoor ahayd oo dhan 80 milyan oo yuuro isagoo u saxiixay heshiis shan sano ah.